Isu takangofungidzira zvipfuwo zvedu zvichitaura nesu asi wakambofungidzira here imba yako ichitaura newe kana mota yako, musuwo uchitaura nemagetsi ekuchinja! Indaneti yakaita kuti izvi zvikwanisike kubatanidza chero zvese zviripo zvakatipoteredza. Iyo firiji, muchina wekuwachisa, microwave uye kunyangwe hari dzako, ikozvino hapana chinhu chisina kubatika nenyika yedhijitari. Zvinhu zvezuva nezuva zvine ma IP adhiresi zvichakurumidza kuve chokwadi. Izvi kutaurirana yezvinhu yave chiono chazvino chetekinoroji ichiti inovandudza hupenyu hwedu. Asi, isu tiri pamatanho ekutanga eIoT. IoT ichavhura hova nyowani dzemari, mamodheru ebhizinesi, uye ruzivo mune tekinoroji. Pamwero wakakura zvaizobatsira kune vese vashandisi vega kuvapa hupenyu hwepamusoro, kunyaradzwa, kuchengetedzeka uye nekambani zvaizobatsira mukuderedza mutengo, kuwana hunyanzvi uye kutonga zviri nani pamabhizinesi avo. IoT ichaunza hunyanzvi hwemapoka matsva kumisika. Mafomu matsva easina waya ekubatanidza uye maprotocol, emabhizimusi mamodheru ane yakaderedzwa mitengo yevaridzi, uye isina kunetseka UI / UX kutaura mashoma. Mhando dzakasiyana matekinoroji akadai seWi-Max, Bluetooth, Wifi, Low Power Wi-Fi, LTE, Ethernet yenguva dzose uye ichangoburwa Li-Fi, ave kutoshandiswa kushandiswa kubatanidza zvikamu zvakasiyana zveIoT kune sensors asi gore rino raizoona Sigfox, LoRaWAN uye 3Gband rakamanikana (NB) riri kuyedzwa. Makambani, kune rimwe divi, angawane mabhenefiti akakura neIoT. Remote basa, kuverenga kweinoteedzera, uye manejimendi, kushanda pamwe nekugadzira, kumhanyisa uye kuwanika, inzvimbo shoma apo tekinoroji yaizoita zvishamiso ..
Midziyo yemumba smart inobvumidza varidzi kudzora uye kutarisa huwandu hwakawanda hwekutenderera senge yakavandudzwa yekutarisisa imba, kudzora kwekuwana, chengetedzo, uye kugona simba. Mazhinji marangi mudzimba dzakangwara ari kubatana pamusoro pezvinhu zvakasiyana siyana zvemidziyo kuti zviite vakangwara, vanoshanda uye vakachengeteka. Midziyo mizhinji yakadai saEskesso, Samsung smart firiji uye Genican iri kuwedzera zviri nyore kune hupenyu hwemunhu wese munzira dzakanakisa. Amazon Echo chimwe chishandiso chakangwara chinoshanda seCPU kune ako ese gadget gadget. Chimwe chakakurumbira chishandiso Kudzidza Thermostat, inogadzirwa neNest, inogadzirisa otomatiki tembiricha yeimba kuburikidza nemasisitimu akadzika. Izvi zvishandiso zvinodhura izvozvi, nekuda kweyekuvandudza mitengo uye kutengesa kwakaderera. Asi nekufambira mberi kwakawanda, mitengo inotarisirwa kudonha ichivaita kuti vawedzere kudhura kune wepakati mutengi. Munguva pfupi tinogona kuonawo vabatsiri vega uye marobhoti achifamba mukati medzimba medu uye ichi chinongova chikamu chidiki chidiki icho IoT iri kuzoshandura. Kunyangwe mu nezveutano indasitiri, IoT iri kugadzira mucherechedzo. Pfungwa ye 'smart mibhedha' iri kuitwa muzvipatara zvishoma zvinokwanisa kuona kufamba kwemurwere uye kugadzirisa kukwirira zvinoenderana kuitira kuti pasave nekudiwa kwevanamukoti kana kupindira kwevanhu. Kune zvakare varapi vekumba vanopa nzira iyo mishonga ikatorwa nenguva kana kwete nerubatsiro rwe data rakachengetwa mugore. Hutano ruzivo rwevateveri vanobatsira nemurwere-chiremba kudyidzana vari kuvhurawo nzira dzehungwaru zvishandiso kuunza mibairo mikuru mumunda wehutano hwehutano. Iine tekinoroji inotanga kushandiswa kwese kwese, ichatora mibairo mikuru nekudzikisa mutengo, mhedzisiro yakagadziriswa yekurapa, ruzivo rwevarwere rwakawedzerwa, zvikanganiso zvakadzikiswa, kusimudzira manejimendi ezvemishonga uye nekuvandudza manejimendi ekurapa.
Kunze kweIOT kushandiswa dzimba dzakanaka, smart chibatiso hurongwa kana zvishandiso zvemagetsi zvinopa nyaradzo uye hupenyu hwega, zvafambira mberi kuita kuti maguta ave nenjere. Nechinangwa chekubatanidza ungwaru neruzivo nemidziyo, makambani akasiyana ari kushanda kumisikidza network yezvinhu zvakabatana. Iko kubatanidzwa kwe analytics, hombe dhata, uye kwese kwese kubatika kuri kuunza mune hukuru hutsva mikana senge kudzora nekugadzirisa zvishandiso, kugona kwekutarisa kure uye kuvaka zvimiro kubva kune yakawanda yedata. Nekudaro IoT iri kushandura shanduko yezvivakwa zvemaguta zvachose nekudzora kuzara kwemotokari, kusimudzira zvifambiso zveveruzhinji, kugadzira mabasa anoshanda uye anodhura emataundi nekuchengetedza vanhu kuita uye kuchengetedzeka. IoT iri kubatanidza akati wandei madhijitari zuva rega rega uye mumakore anouya, isu tingave takakomberedzwa nematanhatu emabhiriyoni makumi maviri nemana maIoT zvishandiso. Zvino ndiwo mamwe makuru nhau! Kunze kwedzimba dzakangwara, masystem ekuchengetera simba-akangwara, zvishandiso zvine hungwaru zvinobatsirawo vanhu kuteedzera hutano hwavo nemishonga inovandudzwa uye yakazara. Dzakabatana mota dzinobatana pamwe neiyo infra yemaguta akangwara kuchinjisa nzira dzakajairika dzaiteedzerwa kare nemadhiraivha. Asi nezvakanaka izvi zvinouyawo nenjodzi.